Uprofita pamusoro penzvimbo ine makomo yeSeiri (1-15)
35 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, tarisa kunyika ine makomo yeSeiri,+ uprofite nezvayo.+ 3 Iudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kukurwisa, iwe nyika ine makomo yeSeiri, uye ndichakutambanudzira ruoko rwangu ndoita kuti uve dongo risina chinhu.+ 4 Ndichaita kuti maguta ako ave matongo, wosara usina kana chinhu;+ uye uchaziva kuti ndini Jehovha. 5 Nekuti wakaratidza ruvengo rwakanyanya+ uye wakaita kuti vaIsraeri vaparadzwe nebakatwa pavakasangana nedambudziko, pavakarangwa kekupedzisira.”’+ 6 “‘Saka neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘ndichaita kuti ropa rako rideurwe, uye rufu ruchakutevera.+ Wakaita kuti ropa revaya vawaivenga rideurwe, saka ropa rako richadeurwawo.+ 7 Ndichaita kuti nyika ine makomo yeSeiri ive dongo risina chinhu,+ uye ndichaparadza munhu anopfuura nemairi nemunhu anodzoka nemairi. 8 Ndichazadza makomo ayo nezvitunha; uye zvitunha zvevanenge vaurayiwa nebakatwa zvichati katakata muzvikomo zvayo, nemumipata yayo, nemuhova dzayo dzese. 9 Ndichaita kuti ugare uri dongo uye maguta ako haazogarwi;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’ 10 “Wakati, ‘Marudzi maviri aya nenyika mbiri idzi zvichava zvangu, uye ndichazvitora zvese,’+ kunyange zvazvo Jehovha aiva pakati pemarudzi acho, 11 ‘saka neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘ndichakuitira zvinoenderana nehasha dzako negodo rako zvawakavaratidza nemhaka yeruvengo rwako;+ uye ndichaita kuti vandizive pandichakutonga. 12 Uchabva waziva kuti ini Jehovha ndakanzwa zvese zvawaitaura uchizvidza makomo eIsraeri uchiti, “Aitwa matongo uye taapiwa kuti tiaparadze.” 13 Makandishora muchizvikudza uye makataura zvakaipa zvizhinji nezvangu.+ Ndakazvinzwa zvese.’ 14 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Nyika yese ichapembera nemufaro pandichaita kuti uve dongo risina chinhu. 15 Wakapembera nemufaro pakaparadzwa nhaka yeimba yaIsraeri, saka ndichakuitirawo izvozvo.+ Uchava dongo risina chinhu, iwe Edhomu yese+ zvayo, nyika ine makomo yeSeiri; uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’”